Waxaan jeclahay in aan la saaxiibo gabar Jarmal ah. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay qof uur leh. Mana DOONAYO in aan ilmo dhallo. Maxaa ila gudboon in aan hadda sameeyo?
Next Next post: Waxaan jeclahay gabar. Dhabtiina waxaan jeclahay in aan xiriir la sameeyo. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?